अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको अभिव्यक्ति वास्तविक सेयर लगानीकर्ताको पक्षमा « Clickmandu
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको अभिव्यक्ति वास्तविक सेयर लगानीकर्ताको पक्षमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्ता अहिले सेयर लगानीकर्ताको बीचमा अत्याधिक चर्चामा छ ।
बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव हटाउन विदेशी पुँजी भित्राउनुपर्ने र यस्तो पुँजी विगतमा जस्तै घरजग्गा, सेयर बजार तथा हायरपर्चेजमा लगानी नगरेर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनाइ अर्थमन्त्री खतिवडाको थियो ।
५ वर्ष गभर्नर हुँदा खतिवडालाई सेयर बजार तथा घरजग्गाका लगानीकर्ताले यसमा कठोर नीति लिने व्यक्तिको रुपमा बुझेका छन् ।
खतिवडाले घरजग्गा तथा सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक भनेका छन् । जुन नीति उनले गभर्नर हुँदापनि लिएका थिए ।
शून्य प्रतिफललाई पनि कित्ताको लोभमा ५०० गुणा मूल्य तिर्ने आफैँ अनि प्रतिफल नदेखेपछि रुने पनि आफैँ ?
सामाजिक संजालमा खतिवडाको भनाइलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाज आएका छन् । तर, अधिकाशं टिप्पणी खतिवडाको अभिव्यक्तिको विरोधमा छ ।
लगातार सेयर बजार घटी रहेको समयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको भनाइले सेयर बजारलाई तत्कालको लागि घटाउन भने मद्दत पुर्याउने अनुमान विश्लेषक छ ।
सेयर बजारका जानकार दीलिप मुनकर्मी अर्थमन्त्रीको भनाईबाट ठूलो रकम ऋण लिएर चलखेल गर्नेलाई असर गरेपनि वास्तविक लगानीकर्ता डराउनुपर्ने र आत्तिनुपर्ने नभएको बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीको भनाईलाई आधार बनाएर सेयर बजारमा मुल्य घटाउने प्रयास हुनसक्छ,’ मुनकर्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थमन्त्री भनाईको बुझाईमा कमी देखिएको हो ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिन चाहिने रकमको अभाव छ । शोधानान्तर घाटा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु खाता घाटा करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
शोधानान्तर घाटामा गएपछि स्वभाविक रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँन्छ । र, ब्याजदर ओरालो लाग्छ । शोधनान्तर बचतमा ल्याउनका लागि विदेशबाट आउने पैसा बढ्नुपर्छ । जुन रेमिटेन्सको माध्यमबाट होस् या विदेशी अनुदान ऋण होस या विदेशी लगानी ल्याएर ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको तरलता अभावको लागि विदेशबाट पुँजी भित्राउनुपर्ने कुरा बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
कम्पनीको कमाउन सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्ने हो । लगानी कस्तोमा गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफ्नो हो ।
विश्लेषक नीरव पुडाशैनी अर्थमन्त्रीको भनाईबाट तत्काल बजार घटाउने प्रयास भएपनि वास्तविक लगानीकर्तालाई असर नगर्ने बताउँछन् ।
‘दोस्रो बजारमा चलखेल गर्नेहरु अर्थमन्त्रीको भनाईबाट डराउने हो,’ पुडाशैनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
सेयर बजार अहिले निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सेयर बजारलाई बढाउन मद्दत गर्ने बैंकको ब्याजदर अत्याधिक महंगो छ । बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाएका बैंकले कर्जा दिँदा न्यूनतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने अवस्था छ ।
हाथवे इन्भेष्टमेन्टका वित्त विश्लेषक प्रकाश तिवारी अर्थमन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्तिलाई लिएर बजार घटाउने प्रयास हुने बताउँछन् ।
‘बजारमा चलखेल गर्नेहरु यस्तै मौकाको खोजीमा हुन्छन्,’ तिवारीले भने, ‘सेयर बजार बढ्ने घट्ने एउटा चक्र अहिले घट्ने चक्रमा छ, एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पुनः बढ्छ ।’
सेयर बजार उत्पादनशिल कि अनुत्पादक ?
अर्थमन्त्री खतिवडाको सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेको भन्दै यसको चर्को आलोचना भएको छ ।
सेयर बजारका जानकारी मुनकर्मी सेयरमार्फत् पुँजी जुटाउने कुरा उत्पादनमुलक भएको र दोस्रो बजारमार्फत् हुने लगानीले अप्रत्यक्ष रुपमा पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउँछन् ।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर तथा हायर पर्चेजमा जाने कर्जालाई अनुत्पादक मुलक क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको छ ।
यस आधारले हेर्दा सेयर बजारमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक नै भनेर हेर्न नहुने धारणा मुनकर्मीको छ ।
लगानीकर्ताले के गर्ने ?
दुईतिहाईको बहुमतले बनेको सरकारमा पार्टीमा बरिष्ठ नेताले रोजेको मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडाको भनाई स्वभाविक रुपमा सेयर बजारमा पर्छ । बजार विश्लेषकहरु भनाइभन्दा पनि आफुले गर्ने लगानीको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सेयर बजारको विशेषता नै बजार बढ्ने समयमा कहिलेपनि लाभांश नदिएका कम्पनीको मुल्य बढेको इतिहास छ । जसको उदाहरणको रुपमा नेशनल हाइड्रो पावरलाई लिन सकिन्छ ।
बजार घटेको समयमा राम्रो लाभांश दिने कम्पनीको पनि मुल्य घट्छ । जुन अहिले राम्रो लाभांश दिएका कम्पनी घट्दो मुल्यले पनि पुष्टी गर्छ ।
यसमा सेयर बजारका अर्को विश्लेषक ज्योति दाहालको फेसकुकमा राखेको धारणा यस्तो छ, ‘अहिले भाउ घटेको छ यसको कारण हकप्रद र बोनसको लोभरमोहमा परि आँखा चिम्लेर ओभर स्पेकुलेसन गर्दै शेयर किन्नु हो, जति हकप्रदरबोनस आएपनि त्यतिबेला हकप्रद र बोनसपछि कम्पनीले गर्नसक्ने सम्भावित नाफा र दिनसक्ने प्रतिफल हेरेर लगानी गरेको भए अहिले आपूर्ति बढी भयो भन्दै अरण्यरोदन गर्नुपर्ने थिएन, शून्य प्रतिफललाई पनि कित्ताको लोभमा ५०० गुणा मूल्य तिर्ने आफैँ अनि प्रतिफल नदेखेपछि रुने पनि आफैँ ?’
अर्थात कम्पनीको कमाउन सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्ने हो । लगानी कस्तोमा गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफ्नो हो ।
पुसभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्यसहित यसरी हुँदैछ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर
काठमाडौं । पुसभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर
कोरोना बीमाः सरकारका कारण बदनाम भए कम्पनी, बीमितले पाएनन् ११ अर्ब
युनिलिभरमा गरेको ५० लाख लगानीले रविभक्तलाई अर्बपति बनायो
काठमाडौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवतर्नपछि नेपालमा बैदेशिक लगानीमा उद्योगहरु खुल्ने क्रम अघिबढ्यो । त्यहीबेला